एक्सेलमा स्ट्रिंगहरू कसरी स्वैप गर्ने? - एक्सेल - 2020
पङ्क्तिहरू Microsoft Excel मा सार्नुहोस्
एक्सेलमा काम गर्दै, कहिलेकाहीँ तपाइँ स्थानहरूमा रेखाहरू स्वाप गर्न आवश्यक पर्दछ। यसको लागि धेरै सिद्ध तरिकाहरू छन्। तिनीहरूमध्ये केही क्लिकहरूमा शाब्दिक रूपमा चल्छन्, जबकि अरूले यो प्रक्रियाको लागि पर्याप्त मात्राको आवश्यकता पर्छन्। दुर्भाग्यवश, सबै प्रयोगकर्ताहरू यी सबै विकल्पहरूसँग परिचित छैनन्, र यसकारण कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ ती प्रक्रियाहरू जुन धेरै तरिकाले अन्य तरिकामा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ मा धेरै समय बिताउँछ। Excel मा रेखाहरु लाई स्वैपिंग को विभिन्न संभावनाहरु लाई हेर्छन।
पाठ: माइक्रोसफ्ट वर्डमा पृष्ठहरू स्वैप गर्न कसरी
रेखाहरूको स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्
धेरै विकल्पहरूको साथ लाइनहरू स्वाप गर्नुहोस्। तिनीहरूमध्ये केही प्रगतिशील छन्, तर अरूको एल्गोरिथ्म धेरै सहज छ।
विधि 1: प्रतिलिपि प्रक्रिया
रेखाहरू स्वाप गर्न सबै भन्दा सहज तरिकाले एउटा नयाँ खाली पङ्क्ति सिर्जना गर्न यसको लागि अर्कोको सामग्री थप्न, स्रोत मेटाउने पछि। तर, जब हामी पछि स्थापना गर्नेछौं, यद्यपि यो विकल्पले आफैलाई सुझाव दिन्छ, यो टाढाको भन्दा टाढा छ र सजिलो छैन।
पङ्क्तिमा कुनै पनि कक्ष छान्नुहोस्, सीधै माथिको हामी जसरी हामी अर्को रेखा उठाउछौं। दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। सन्दर्भ मेनु सुरु हुन्छ। यसमा वस्तु छान्नुहोस् "टाँस्नुहोस् ...".
खोलिएको सानो सञ्झ्यालमा, जुन ठीक छ कि छान्नु छनौट गर्न प्रस्ताव गर्दछ, स्विचलाई स्थितिमा सार्नुहोस् "स्ट्रिङ"। बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "ठीक".
यी कार्यहरू पछि, खाली पङ्क्ति थपिएको छ। अब रेखा तालिका छान्नुहोस् जुन हामीले उठाउन चाहन्छौ। र यो समय यो पूर्णतया आवंटित गर्न आवश्यक छ। हामी बटन थिच्दछौं "प्रतिलिपि"ट्याब "गृह" मा साधन टेप ब्लकमा "क्लिपबोर्ड"। यसको सट्टा, तपाईं हट कुञ्जीहरूको संयोजन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ Ctrl + C.
खाली पङ्क्तिको बाँयाको कक्षमा कर्सर राख्नुहोस् जुन पहिले थपिएको थियो, र बटनमा क्लिक गर्नुहोस् टाँस्नुहोस्ट्याब "गृह" सेटिङ समूहमा "क्लिपबोर्ड"। वैकल्पिक रूपमा, यो कुञ्जी संयोजन टाइप गर्न सम्भव छ Ctrl + V.
पङ्क्ति सम्मिलित भएपछि, तपाइँ प्रक्रिया प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि प्राथमिक पङ्क्ति मेटाउनुपर्दछ। दाँया माउस बटनको साथ यो रेखाको कुनैपनि कक्षमा क्लिक गर्नुहोस्। सन्दर्भ मेनुमा यो पछि देखा पर्दछ, वस्तु चयन गर्नुहोस् "मेट्नुहोस् ...".
एक लाइन थप्नको लागी, सानो सञ्झ्याल खोल्दछ जसले तपाइँलाई मेटाउन चाहानु भएको छ भनेर छनोट गर्दछ। वस्तुको विपरीत स्थितिलाई स्विच गर्नुहोस् "स्ट्रिङ"। हामी बटन थिच्दछौं "ठीक".
यी चरणहरू पछि, अनावश्यक वस्तु मेटिनेछ। यसैले, पङ्क्तिहरूको अनुमतिकरण गरिनेछ।
विधि 2: सम्मिलन प्रक्रिया
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, माथि उल्लेखित तरिकामा स्थानहरु संग तार को बदलन को लागि प्रक्रिया जटिल छ। यसको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत ठूलो मात्राको आवश्यकता हुनेछ। आधा समस्या तपाईलाई दुई पङ्क्तिहरू स्वरुप गर्न चाहानुहुन्छ, तर यदि तपाईं दर्जन वा बढी रेखाहरू स्वरुप गर्न चाहानुहुन्छ भने? यस अवस्थामा, एक सजिलो र छिटो प्रविष्टि प्रविष्टि बचत हुनेछ।
ठाडो समन्वयन प्यानलमा लाइन नम्बरमा बायाँ क्लिक गर्नुहोस्। यस कार्य पछि, पुरा श्रृंखला हाइलाइट गरिएको छ। त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। "काटी"जुन ट्याबमा रिबनमा स्थानीयकृत गरिएको छ "गृह" उपकरणको ब्लकमा "क्लिपबोर्ड"। यो कैंचीको रूपमा चित्र चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ।
समन्वय प्यानलमा दायाँ माउस बटन क्लिक गरेर, माथिको रेखा चयन गर्नुहोस् जुन हामीले राख्नु पर्छ पहिले पानाको पङ्क्ति कट। सन्दर्भ मेनुमा जाँदै, वस्तुमा चयन रोक्नुहोस् "काटी कक्ष घुसाउनुहोस्".
यी कार्यहरू पछि, काट रेखा निर्दिष्ट स्थानमा पुन: सारिनेछ।
तपाईंले देख्न सक्नु भएको छ, यो विधिले अघिल्लो एक भन्दा कम कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ, जसको अर्थ तपाईं यसको साथ समय बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
विधि 3: माउस सार्नुहोस्
तर अघिल्लो पद्धति भन्दा छिटो चाल विकल्प छ। यसमा माउस र किबोर्ड प्रयोग गरेर लाइनहरू तान्नु समावेश छ, तर रिबनमा सन्दर्भ मेनु वा उपकरणहरू प्रयोग नगरी।
बायाँ माउस बटन क्लिक गरेर चयन गर्नुहोस् जुन हामी सार्न चाहानुहुन्छ लाइनको समन्वय प्यानलमा।
यस रेखाको माथिल्लो सीमामा कर्सर सार्नुहोस् जब सम्म ती तीरको रूप लिन्छ, अन्तमा चार बिन्दुहरू फरक दिशा निर्देशनमा छन्। हामी किबोर्डमा शिफ्ट बटन राख्दछौं र बसमा पङ्क्ति तान्नुहोस् जहाँ हामी यसलाई अवस्थित हुन चाहन्छौं।
तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ, यो आन्दोलन एकदम सरल छ र रेखा जहाँ हुन्छ त्यो प्रयोगकर्ता स्थापना गर्न चाहन्छ जहाँ हुन्छ। यो गर्नका लागी, तपाईं केवल माउसको साथ कार्य गर्न आवश्यक छ।
एक्सेलमा स्ट्रिंगहरू स्वाप गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। को लागी प्रस्तावित विकल्पहरू प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ। एक गति बनाउन पुरानो तरिकामा अधिक सुविधाजनक र अधिक परिचित छ, प्रतिलिपिको प्रक्रिया प्रदर्शन र पङ्क्तिहरू पछि हटाउन, जबकि अन्य अधिक प्रगतिशील तरिकाहरू मनपर्छ। प्रत्येकले व्यक्तिगत रूपमा विकल्पको लागि आफैले विकल्प चयन गर्दछ, तर, हामी भन्न सक्छौं कि केहि स्थानहरूमा लाइनहरू परिवर्तन गर्न सबै भन्दा तेज तरिका माउससँग ड्र्याग गर्ने विकल्प हो।
भिडियो हेर्नुहोस्: How to Insert Delete Columns, Rows and Cells in Microsoft Excel 2016 Tutorial (जनवरी 2020).
मरम्मत र पुनर्स्थापना
https://termotools.com ne.termotools.com © एक्सेल 2020